Dhibaatada beeraha makro | Bezzia
Dhibaatada weyn ee beerta
Maria vazquez | | Wararka
Beryahan danbe waxa miiska la soo dhigay doodo aad u muhiim ah oo hadheeyay iska hor imaad siyaasadeed. Midka ugu dambeeya ee beeraha macro, oo si dhow ula xidhiidha qaabka cuntada ee dalalka horumaray intooda badan. Laakiin waa maxay dhibaatada dhabta ah ee qaabkan wax soo saarka?
Bezzia waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad fahanto sababta aan uga hadlayno beeraha macro, maxay yihiin dhibaatooyinka deegaanka iyo bulshada ee la xiriira kuwan iyo waxa ka duwan kuwan ayaa jira. Sababtoo ah waxaa xaqiiqo ah oo aan shaki ku jirin in wax soo saarka cunnada xoolaha ka soo baxda ee beeraha waaweyn ay saameyn xun ku leedahay deegaanka.
1 Qaabka quudinta
2 Dhibaatada weyn ee beerta
2.1 Daryeelka xoolaha iyo luminta noocyada wadaniga ah
2.3 Isticmaalka biyaha iyo wasakheynta
2.4 wasakhowga ciidda
2.5 beer ka tegid
Isticmaalka sii kordhaya ee borotiinka xoolaha ee wadamada horumaray iyo, guud ahaan, qaabka quudinta ee ka jira kuwaas ayaa horseeday wax soo saarka degdega ah. Sidaa darteed, wax soo saar badan, wax soo saarka si degdeg ah iyo kharashka ugu hooseeya ayaa lagu soo rogay.
Habka wax-soo-saarka oo ka jira qaybta xoolaha ayaa horseeday badinta beero xoog leh ama beero waaweyn. Goobo waaweyn oo farsamo sare leh oo xoolaha lagu dhaqdo iyadoo ujeedadu tahay in la gaaro wax soo saarka hilibka ugu badan waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Guud ahaan, iyada oo aan fiiro gaar ah loo yeelan tayada hilibka la soo saaro ama saamaynta deegaanka, bulshada ama caafimaadka ee qaabkan wax soo saarka.
Iyadoo laga duulayo baahidan hilibka ah, deegaanku wuxuu u baahday in laga soo saaro 1.000 milyan oo tan oo qamadi, barley, boorash, galley ah, galley, masago iyo masago ah oo sanad walba adduunka laga cuno si xoolaha loo quudiyo. Maanta a 30% oogada dhulka waxa loo isticmaalaa xoolaha nool oo soo saara, a 14,5% gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo hawlaha aadanaha ee heer caalami ah. Laakiin tani maaha saamaynta kaliya ee beerashada xooluhu ku leedahay deegaanka, waayo waxaan heli doonaa waqti aan hoos ku eegno.
Sanadihii ugu dambeeyay, mashaariicda ayaa batay beeraha degdega ah ee Yurub guud ahaan iyo gaar ahaan dalkeena. Taasi waa sababta dooddu ay lagama maarmaan u tahay, iyo sidoo kale in la dhex geliyo deegaanka, bulshada ama saameynta caafimaad ee qaabkan wax soo saarka.
Daryeelka xoolaha iyo luminta noocyada wadaniga ah
Xoolaha ayaa laga helaa beerahaas xidhan oo buux dhaafiyey, kaas oo keena walaac weyn iyo khataro halis ah oo ay sabab u tahay faafitaanka cudurrada. Xaalad u baahan dawooyin nidaamsan oo ka hortag ah oo xoolaha ku dhex jira xarumaha iyada oo loo marayo waxa loogu yeero quudinta dawada.
Waxaa intaa dheer, noocyada la isticmaalo laguma soo xulan beeraha waaweyn si ay ula qabsadaan xaaladaha cimilada iyo deegaanka ee meelaha ay ku koraan, laakiin waxaa lagu doortay beerahooda. awood uu si degdeg ah u koro. Sidaa darteed, qaabka noocan oo kale ah wuxuu keeni karaa, mustaqbalka, luminta noocyada qaar ee asalka ah.
Dhaqashada lo'du waxay la xiriirtaa qiiqa Gaasaska cagaaran. Dhab ahaantii, sidaan horeba u soo sheegnay, dhaqashada xooluhu waxay soo saartaa qiyaastii 14,5% gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ka yimaada hawlaha bani'aadamka ee heerka caalamiga ah.
Wax soo saarka xoolaha ayaa ah inta badan wasakhowga hawada ee ay dhaliyaan waaxda beeralayda. Gaar ahaan, ammonia, particulates, iyo xeryahooda dabiiciga ah ee aan methane ahayn. Waqtigan xaadirka ah, uruurinta badan ee xooluhu waxay ka dhigaysaa mid aan suurtogal ahayn in waddankeena uu u hoggaansamo xeerarka Yurub xadka qiiqa ammonia. Ma ogtahay xogtan?
Isticmaalka biyaha iyo wasakheynta
Kaarboonka deegaanka ee ka imaanaya dhaqashada xoolaha ee xoogga leh ayaa sidoo kale saameyneysa ka faa'iidaysiga kheyraadka aan dhamaadka lahayn sida biyaha. Biyaha dib loogu celiyo deegaanka oo ah nooca purines. Magacaabi tan kaas oo lagu yaqaan qashinka dabiiciga ah ee ka sameysan qashinka, saxarada, khudradda iyo cuntada.
Sababaha qashinka oo si khaldan loo maareeyo faddarayn biyo-mareennada iyo webiyada oo leh Nitrates, oo mas'uul ka ah 80% nitrogen-ka oo waxyeeleeya tirada biyaha. Saameynteeda ayaa ah in aagga ay saameysay wasakhda Nitrate-ku ay durba gaarto ku dhawaad ​​rubuc dalka.
Digadu waxay kaloo saamaysaa tayada carrada. Intaa waxaa dheer, xooluhu waxay sababaan daamurka iyo xidhitaanka dhulka barwaaqada ah iyo, sidaas darteed, jarista dhirta.
beer ka tegid
74% dawladaha hoose ee martigeliya beeraha waaweyn lumin dadka. Urta xun ee digada ay soo saarto, wasakhda biyaha dhulka hoostiisa ku jirta iyo duqsiga oo batay kaliya kuma koobna in ay adkaato in lagu noolaado agagaarkeeda balse waxa ay la macno tahay in uu meesha ka baxay dalxiiskii dabeecadda iyada oo shaqo la’aantu keentay.
The macro farms Sidoo kale ma soo saaraan shaqo. Sababtoo ah heerka sare ee tignoolajiyada, xaruntan noocan ah waxay soo saartaa shaqooyin aad u yar, iyada oo loo eegayo amarka hal shaqaale waqti buuxa ah oo loogu talagalay 5000 oo doofaarro ah.
Sidoo kale, waxa suuqa soo galay hilib aad u tiro badan oo qiimo jaban ku yimid, isla markaana ay wehelinayaan habab qaybineed oo faa’iidada ugu badan ku reebaysa dhex-dhexaadinta, isla markaana ay aad ugu yar tahay gacanta beeralayda. beero yaryar oo ganacsigoodii ka baxay.
Sida laga soo xigtay xogta laga soo xigtay Wasaaradda Beeraha, Spain waxay u socotaa dhinaca qaabka wax soo saarka tirada badan ee lo'da hilibka lo'da iyo hilibka doofaarka. Tirada guud ee beeraha ayaa hoos u dhacaysa, si kastaba ha ahaatee, tirada beeraha makro waxay ku koraan muuqaalka miyiga Isbaanishka. Wadanku horeyba waa soo saaraha ugu horreeya ee hilibka doofaarka ee Yurub, oo soo saara qiyaastii saddex jeer hilib ka badan inta uu isticmaalo.
Beddelka qaabkan lagu soo rogay waa inuu ku jiraa, hal dhinac, dhimista cunista hilibka qofkiiba (sida lagu taliyay in Ahraamta cuntada) iyo dhinaca kale, u heellanaanta hababka xoolaha ee ballaaran. Labadaba waa in laga soo dalacsiiyo hay'adaha si loo dammaanad qaado sii jiritaan deegaan, dhaqaale iyo bulsho.
beerasho ballaaran Waa wax ku ool ah marka meelaha daaqsinta la isticmaalo si ay xooluhu u noqdaan kuwo isku filan, kuma xidhna quudinta dibadda laga keeno iyo isticmaalka sare ee shidaalka fosil. Intaa waxaa dheer, xaaladahan, xayawaanku waxay fududeeyaan nadiifinta xuduudaha, waddooyinka iyo beeraha, waxay caawiyaan nadiifinta buuraha iyo xakamaynta dabka, nidaaminta tayada ciidda waxayna gacan ka geystaan ​​kor u qaadida kala duwanaanta noolaha, hubinta joogtaynta dadweynaha ee deegaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Dhibaatada weyn ee beerta
Ma qabtaa dhuun xanuun markaad wax liqeyso? Soo ogow sababaha suurtogalka ah
Maxaa la sameeyaa haddii ilmuhu si joogto ah u xanaaqo